China gorofu SOLAR BHURE MIRIRA KUVARIDZA vagadziri uye vanotengesa | Hupenyu
Gorofu yezuva gadheni mwenje ine yakashongedzwa dhizaini uye modular kusangana dhizaini.
Iyo nyanzvi maindasitiri dhizaini timu inogadzira ezvezuva mapaneru, mwenje masosi, macontroller, mabhatiri akabatanidzwa; Na Philips Lumileds, iyo sosi sosi chip, iyo inoburitsa mwenje, inobwinya kushanda, uye hupenyu hwebasa hunosangana nematanho epasi rose.
Gorofu yezuva gadheni mwenje ine yakashongedzwa dhizaini uye modular kusangana dhizaini. Iyo nyanzvi maindasitiri dhizaini timu inogadzira ezvezuva mapaneru, mwenje masosi, macontroller, mabhatiri akabatanidzwa; Na Philips Lumileds, iyo sosi sosi chip, iyo inoburitsa mwenje, inobwinya kushanda, uye hupenyu hwebasa hunosangana nematanho epasi rose. Iyo tembiricha tembiricha inogona kugadziriswa zvinoenderana neshanduko yemwaka. Iyo inotonhora uye inodziya mwenje ye 3000K - 6500k inogona kuve yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvemwenje enzvimbo dzakasiyana.
Microwave induction yakangwara radar tekinoroji. Microwave induction inogona kugadzirisa kupenya kwemwenje pamwe nekufamba kwechinhu, kuwedzerwa simba-kuponesa, humanized; Power akangwara murau: otomatiki kutonga mamiriro ekunze uye zvine musoro kuronga kudzikamisa murau;
Akangwara dhizaini: yakadzamidzirwa micro-komputa yekudzora system, akangwara kudzora kwechaji uye kuburitsa, akawanda anoshanda modes, ita kuti iyo sisitimu yese ishande zvakanyanya uye simba-kuchengetedza; Akangwara kubhadharisa uye kuburitsa manejimendi: kubhadharisa uye kuburitsa zvakapfava uye zvakaoma mbiri dziviriro uye akangwara chiyero tekinoroji, kutenderera kuchaja uye kuburitsa kanopfuura ka2000 nguva; Detachable light pole iri nyore kuisa uye kutakura.
Gorofu Zvikamu zveGoridhe Solar Bindu Mwenje
Rated simba: 40AH
Tsanangudzo yemuenzaniso: KZ32
Zvinyorwa: profile aluminium + die-cast aluminium
Rated simba: 10W
Rated simba: 18W
Parameter YeGoridhe Solar Bindu Mwenje
Mono pani: 5V / 18W
Rudzi rwechiedza sosi
Chiedza chekugovera mwenje
Lens yeBhatwing (150 × 75 °)
Pashure: DZAKANYANYA SOLAR Bindu MUDZIMAI
Zvadaro: YEMAHARA UNHU SOLAR LED MUDZIMAI MURAYI
Akanyanya Solar Street Mwenje
Pole Solar Street Chiedza
Residential Solar Street Mwenje
Solar Module Kutengesa
Solar Simba Module
Solar Street Mwenje Mutengo
Solar Street Chiedza Chekumba
Solar Street Mwenje Nebhatiri
Solar Street Mwenje System
MONO-90W Uye PLOY-90W
ZVINOGONESESA SOLAR PANEL CHARGER 60W Iine USB PORT ...
SMART INTEGRATED SOLAR STREET CHIEDZA
YEMAHARA UNHU SOLAR LED MUDZIMAI MURAYI